साढे ३४ करोड लगानीको बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिलसाइटको कार्य तिव्र गतीमा, जेठदेखि फोहर फाल्न सकिने ! – BUSINESSPANA.COM
साढे ३४ करोड लगानीको बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिलसाइटको कार्य तिव्र गतीमा, जेठदेखि फोहर फाल्न सकिने !
April 10, 2021 April 10, 2021 Businesspana
अहिलेकै गतिमा काम भए आगामी आगामी जेठ पहिलो सातादेखि बञ्चरेडाँडामा निर्माणाधीन दीर्घकालीन स्यानिटरी ल्याण्डफिलसाइटमा काठमाडौँ उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापन गर्न सकिने भएको छ । केही समय कोरोना भाइरस र निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने नदीजन्य सामग्री प्राप्त गर्न नसक्दा निर्माणको कामले गति लिन नसकेको भए पनि पछिल्लो समय निर्माणको सामग्री सहजरुपमा प्राप्त भएकाले सोहीअनुरुप निर्माणको काम भएकाले आगामी जेठ पहिलो सातादेखि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहर विर्सजन गर्न सकिने आयोजनाले जनाएको छ ।
उपत्यकाबाट दैनिक करीब एक हजार मेट्रिकटन फोहर निस्कन्छ । यसमा सबैभन्दा बढी कामपाबाट निस्कने गरेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाबाट दैनिक उत्सर्जन हुने फोहरमध्ये करीब ७५ प्रतिशत सिसडोलमा व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ । हरेक दिन उपत्यकाबाट निजी र कामपाको गरी २०० गाडी फोहर लगिने गरिएको छ । सिसडोलका प्रभावित स्थानीयले एक हप्ता पहिले पनि स्वास्थ्य र शिक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने भन्दै आठ दिनसम्म उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापन कार्यमा बाधा पुर्याएका थिए ।
Previous: घट्यो ‘रियलमी सी १५’ को मुल्य, यस्ता छन् फिचर !
Next: दश वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्र सय अर्ब डलर पु¥याउने लक्ष्य ।।